ए लेभल विद्यार्थीको रोजाइ - Karobar National Economic Daily
ए लेभल विद्यार्थीको रोजाइ
query_builderApril 21, 2017 11:46 AM supervisor_accountगोपाल संग्रौला visibility576
काठमाडौं : ए लेभल क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको विश्वभर अध्ययन हुने पाठ्यक्रम हो । ए लेभलको विशेषता भनेको विद्यार्थीको ज्ञान र विषयगत दायरा फराकिलो गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गराउने हो ।
क्याम्ब्रिजको एस र ए लेभलमा विश्वभरका १ सय ६० भन्दा बढी देशका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको ओरियन्ट कलेजका प्रिन्सिपल नारायण प्रसाद बराल बताउँछन् । ए लेभलमा १६ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीका लागि बढी रहने गरेका छन्, जसले उच्च शिक्षाको तयारीका लागि अतिरिक्त अध्ययनको आवश्यकता ठान्छन् । “ए लेभल कोर्स पढेका अत्यन्तै डायनामिक हुन्छन् । भविष्यमा कुन क्षेत्रमा जाने हो, त्यसअनुसार अवधारणा बनाउनुपर्छ,” प्रिन्सिपल बराल भन्छन् ।
विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गराउनुपूर्वको शिक्षा नै ए लेभल हो । यो बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयअन्तर्गत क्याम्ब्रिज इनटरनेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड (सीआर्ई) ले चलाउने जनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन (जिसीई) को शैक्षिक कार्यक्रम हो ।
व्रिटीस मोडल कलेजका प्रिन्सीपल डा. माइकल जे. बान्र्स ए–लेभल अध्ययन गर्नको धेरै नै कठोर हुने र यसले उच्च शैक्षिक मापदण्ड खोज्ने बताउँछन् । उनले बिएमसीको कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीको रुची र प्रतिभा मिल्ने खालको धेरै नै लचकदार विषय संयोजन प्रदान गर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले यो पाठ्यक्रमलाई प्रमाणपत्र वा प्लस टु सरहको मान्यता दिएको भएको भएपनि यसको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ ।
विश्वमै प्रसिद्ध बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको जनरल सर्टिफिकेट अफ एजुकेसन (जीसीई) कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने एक शैक्षिक कार्यक्रम हो ए लेभल । यसलाई नेपालको शिक्षासँग तुलना गरियो भने दश जोड दुईसरह मान्न सकिन्छ । जसरी दश जोड दुईको कोर्स २ वर्षको हुन्छ, ए लेभलको पनि त्यही नै हो ।
ए लेभलको पाठ्यक्रम
ए लेभलको पाठ्यक्रमको उद्देश्य उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न तहको अध्ययनका लागि अवसर सहज बनाउने हो । ए लेभलमा लिइने परीक्षाले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि आकर्षक क्षेत्रमा जाने अवसर सहज बनाउँछ ।
ए लेभल पास गरेका विद्यार्थीले विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा लिन पाउने ढोका खोल्ने गरेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अवसर पाउन क्याम्ब्रिजको एएस र ए लेभलको परीक्षा दिने गरेका छन् ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीसँग तुलना गर्दा एस ११ र ए १२ बराबरको मान्यता हो । बेलायतका र अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालयले क्याम्ब्रिजको ए लेभलको योग्यतालाई मान्यता दिन्छन् ।
एएस र ए लेभल पास गरेका विद्यार्थीले उनीहरूको रुची र करियरअनुसार विषय छनोट गर्न पाउँछन् । थुप्रै विषयमध्येबाट आफ्नो रुचीको विषय छान्दा विद्यार्थीमा विषय बुझ्ने र स्वतन्त्र र ठोस निर्णय गर्ने सीपको विकास हुन्छ ।
ए लेभलमा लिखित परीक्षाद्वारा मूल्यांकन गरिन्छ । परीक्षाको प्रश्नपत्रमा निबन्ध, छनोटको आधारमा उत्तर लेख्ने विविधता हुन्छ । विज्ञान समूहका विषयको परीक्षा मौखिक र व्यवहारिक विधिबाट सिकाई परीक्षण गरिन्छ ।
ए लेभलको परीक्षा प्रणाली र ग्रेडिङ प्रणाली पनि विश्वमा एउटै मापदण्डको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष मे र जुनमा तथा अक्टोवर र नोभेम्बरमा परीक्षा सञ्चालन भएर परिणाम अगष्ट र जनवरीमा आउने गरेको छ ।
पाठ्यक्रमदेखि पाठ्यसामग्रीहरू सबै विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । परीक्षा शुल्क क्याम्ब्रिजले तोकेकै आधारमा हुन्छ । तोकिएको परीक्षा शुल्कका अतिरिक्त कलेजले आफ्नै किसिमले शुल्क लिन्छन् । कलेजले आफ्नो हौसिय अनुसार यसको शुल्क लिदै आइरहेका छन् ।
ए लेभलका विशेषता
ए लेभलको राम्रो विशेषता भनेको ५ दर्जन भन्दा बढी विषय विद्यार्थीले आफ्नो रुची अनुसार छनोट गरेर अध्ययन गर्ने विकल्प पाउँछन् । यसको पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, ग्रेडिङ प्रणाली आदि सबै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले तय गरेको हुन्छ ।
विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटै प्रणालीबाट यसको पठनपाठन हुन्छ । विद्यार्थीले ५ दर्जन विषयमध्ये कुनै चारवटा विषयमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ए लेभल पूरा गरेको मानिन्छ । ए लेभल पढाइको मान्यता लिन ब्रिटिस काउन्सिलमा कलेज दर्ता गरेर नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति प्रदान भएपछि मात्र ए लेभलको कक्षा सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
हालै मात्र सरकारले ३६ वटा कलेजलाई ए लेभलको अध्ययन अनुमति दिएको छ । ए लेभलको कोर्स सेमिनार, छलफल, प्रयोगात्मक, समूह क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट वर्क, अनुसन्धान र समसामयिक विषयको अध्ययन अध्यापनमा आधारित हुने गरेका कारण यसलाई व्यवहारिक मानिन्छ ।
नेपालमा ए लेभल
नेपालमा विद्यालय तहमा राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनको लक्ष्य पूरा गर्न ए लेभलको अध्ययन गर्ने गरेका छन् । नेपाल विगत केही वर्षयता विद्यार्थी तथा अभिभावकमा यसप्रति आकर्षण बढ्नुको कारण ए लेभलको विश्व मान्यता पाठ्यक्रम, व्यवहारिक तथा प्रयोगमुखी शिक्षा र राम्रा विद्यार्थीका कारण नजिता आउनु नै हो । नेपालमा ए लेभल अध्ययन गरी राम्रो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई क्याम्ब्रिज युर्निभर्सिटीले सम्मान समेत गर्ने गरेको छ ।
ए लेभल बेलायती शिक्षा प्रणालीमा आधारित भएका कारण यो तह पढेका विद्यार्थीहरूले बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपभरका सबै मुलुकका विश्व अध्ययनको राम्रो अवसर पाउने गरेका छन् । ओरियन्ट कलेजका प्रिन्सिपल नारायण प्रसाद बराल मेडिकल क्षेत्रमा जानका लागि फिजिक्स, केमेस्ट्री ,बायोलोजी विषय छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही कलेजहरू
काठमाडौं युर्निभर्सिटी हाई स्कुल
मल्पी इन्टरनेसनल कलेज
ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज
ए लेभलको ग्रेड निर्धारण
ए प्लस ९० देखि १००
ए ८० देखि ८९
बी ७० देखि ७९
सी ६० देखि ६९
डी ५० देखि ५९
इ ४० देखि ४९
शैक्षिक प्रणाली नै व्यावहारिक र विश्व प्रतिस्पर्धी भएका कारण ए लेभलले विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासी, जिम्मेवारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने गरेको कलेजको दाबी छ । ए लेभल सकेपछि विद्यार्थीले आफ्नो विषयगत अध्ययनका आधारमा चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मानविकी जुनसुकै विषयमा पनि अध्ययन गर्न विश्वका जुनसुकै विश्वविद्यालयमा पाउँछन् ।
नेपालमा ए लेभल पढेपछि इन्जिनियर पढ्न पाइँदैन भन्ने भ्रम पनि कतिपयमा छ, तर त्यो सत्य होइन । ए लेभल पढेर धेरै विद्यार्थीले डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स लगायतका प्राविधिक विषय अध्ययन गरेको पाइन्छ ।
लेखा, बजार शास्त्र, र अर्थशास्त्र पढ्नेले बिबिए पढ्न पाउँछ । नेपालमा धेरै विद्यार्थीले ए लेभल सकेर स्नातक तहमा आफूले चाहेको संकायमा पढिरहेका छन् । ए लेभल पढेका विद्यार्थीहरूले बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र युरोपका सबै मुलुकका विश्व विद्यालयको ४ वर्षे कोर्षमा ३ वर्ष मात्र पढे पुग्छ ।
त्यसैले ए लेभल अब नेपाली विद्यार्थीका लागि विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ढोका खोलेर आएको छ । हालसम्म ३६ वटा कलेजले ए लेभलको अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमती लिएका छन् ।
ए लेभल क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय ओरियन्ट कलेज